Natural apple green jed onyx marble nkume slab maka mgbidi n'ala taịlị
Natural apple green jed onyx marble nkume slab maka mgbidi n'ala taịlị
Obere onyx na-acha akwụkwọ ndụ bụ nkume sitere na Afghanistan gwuru.Site na veinings na-acha ọcha dị nro na-agba ọsọ n'elu, ọ na-egosipụta ịdị mma na ịma mma.
Akụkụ ya dị mma nke pụtara ìhè, dị ka nke onyx ndị ọzọ, na-enye ya ihe kacha mkpa maka ndị na-achọ ihe nkume dị ịrịba ama na nke dị egwu maka ebe dị ka panel TV, mgbidi ụlọ, ụlọ ịsa ahụ, ụlọ ịsa ahụ, na ebe a na-anabata ndị ọbịa, n'etiti ndị ọzọ.
Aha ngwaahịa Natural apple green jed onyx marble nkume slab maka mgbidi n'ala taịlị
Ngwa/ojiji Ime na mputa mma na-ewu oru ngo / magburu onwe ihe maka ime ụlọ & n'èzí ịchọ mma, ọtụtụ ebe maka mgbidi, flooring tile, Kitchen & Vanity countertop, wdg.
Nkọwa nha Dị na nha dị iche iche maka ngwaahịa dị iche iche.
(1) Gang hụrụ slab nha: 120up x 240up na ọkpụrụkpụ nke 1.8cm, 2cm, 3cm, wdg;
(2) Obere slab nha: 180-240up x 60-90 na ọkpụrụkpụ nke 1.8cm, 2cm, 3cm, wdg;
(3) Bee-to-size size: 30x30cm, 60x30cm, 60x60cm na ọkpụrụkpụ nke 1.8cm, 2cm, 3cm, wdg;
(4) Tile: 12 "x 12" x3 / 8" (305x305x10mm), 16"x16"x3/8" (400x400x10mm), 18"x18"x3/8" (457x457x10mm), 24"x12"x3/8" 610x305x10mm), wdg;
(5) Countertops nha: 96"x26", 108"x26", 96"x36", 108"x36", 98"x37" ma ọ bụ oru ngo size, wdg.
(6) Oke ihe efu: 25 "x22", 31" x22", 37" x/22", 49" x22", 61 "x22", wdg.
(7) Nkọwa ahaziri ahazi dịkwa;
Ụzọ Ọgwụgwụ Nke a kpochapụrụ agbachapụ, kwara akwa, ọkụ, aja gbawara agbawa, wdg.
ngwugwu (1) Slab: Oke osisi ùkwù osisi;
(2) Tile: Igbe Styrofoam na pallets osisi kwesịrị ekwesị;
(3) Ihe efu n'elu: Seaworthy ike osisi crates;
(4) Dị na ahaziri mbukota chọrọ;
A na-ahụkwa onyx green, otu n'ime nkume ndị kasị baa uru n'ụwa, maka ịdị jụụ na ịdị mma ya.Nkume ahụ nwere ike ịtọhapụ gị na nchegbu ọ bụla, nchekasị na nchekasị.A na-ekwukwa na ọ na-enye nkwado uche dị ike ma dị mma.
Green Onyx bụ nhọrọ magburu onwe ya maka taịlị, ebe a na-esi nri kichin, ihe efu ụlọ ịsa ahụ, mosaics, na akụkụ mgbidi.Anyị nwekwara ike ebipụ gị nkọwa.
Onyx marble maka ịmepụta echiche ịchọ mma
Rising Source Group bụ onye na-emepụta ma na-ebubata mabụ eke, granite, onyx, agate, quartzite, travertine, slate, nkume wuruwuru na ihe ndị ọzọ sitere n'okike.Quarry, Factory, Sales, Design and Installation bụ akụkụ nke otu.E hiwere otu a na 2002 ma nwee ụlọ ọrụ ise na China ugbu a.Ụlọ ọrụ anyị nwere ngwá ọrụ akpaaka dị iche iche, dị ka ịkpụ blọk, slabs, tile, waterjet, steepụ, counter n'elu, tebụl n'elu, ogidi, uwe mwụda, isi iyi, akpụrụ akpụ, mosaic tile, na na.
Anyị nwere ọtụtụ nhọrọ ihe nkume na ngwọta nkwụsịtụ & ọrụ maka ọrụ mabul na nkume.Ruo taa, na nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe, igwe ndị dị elu, ụdị njikwa dị mma, na ndị ọkachamara na-emepụta ihe, imewe na ntinye ọrụ.Anyị arụchaala ọtụtụ nnukwu ọrụ gburugburu ụwa, gụnyere ụlọ gọọmentị, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ebe ịzụ ahịa, Villas, ụlọ, KTV na klọb, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ọgwụ, na ụlọ akwụkwọ, na ndị ọzọ, ma wulitela aha ọma.Anyị na-eme mgbalị ọ bụla iji zute ihe siri ike maka nhọrọ nke ihe, nhazi, mbukota na mbupu iji hụ na ihe ndị dị elu rutere n'enweghị nchebe na ọnọdụ gị.Anyị ga na-agba mbọ mgbe niile maka afọ ojuju gị.
Site na ngwugwu osisi siri ike
Ejiri ihe nkiri plastik na ụfụfụ plastik kpuchie ya, wee banye n'ime igbe osisi siri ike na fumigation.
Anyị na-ekere òkè na ihe ngosi tile nkume gburugburu ụwa ruo ọtụtụ afọ, dị ka mkpuchi na US, nnukwu 5 na Dubai, nkume ngosi na Xiamen na ihe ndị ọzọ, anyị na-abụkwa otu n'ime ụlọ ntu kacha mma na ihe ngosi ọ bụla!Ndị ahịa na-eresị ihe nlele!
Kedu uru gị bara?
Ụlọ ọrụ na-akwụwa aka ọtọ na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya na ọrụ mbupụ ruru eru.
Kedu ka ị ga-esi kwe nkwa ịdị mma?
Tupu mmepụta uka, a na-enwekarị ihe nlele mbụ;Tupu mbupu, enwere nyocha ikpeazụ mgbe niile.
Kedu ihe ị nwere n'ụdị akụrụngwa akụrụngwa?
A na-edobe mmekọrịta imekọ ihe ọnụ ogologo oge na ndị na-ebubata akụrụngwa akụrụngwa, nke na-eme ka ngwaahịa anyị dị elu site na nzọụkwụ 1st.
Kedu ka njikwa ogo gị si dị?
Usoro njikwa mma anyị gụnyere:
(1) Kwenye ihe niile na onye ahịa anyị tupu ịkwaga na mmepụta na mmepụta;
(2) lelee ihe niile iji hụ na ha ziri ezi;
(3) Were ndị ọrụ nwere ahụmahụ were nye ha ọzụzụ kwesịrị ekwesị;
(4) Nyocha n'ime usoro mmepụta dum;
(5) Nyocha ikpeazụ tupu ebugo.
Chọgharịa okwute onyx anyị ndị ọzọ ka ịchọta plethora nke ihe ịchọ mma sitere n'okike na-echere itinye glitz aghụghọ n'ụlọ gị.
Nke gara aga: Ọnụ ego marble onyx na-acha odo odo maka ndabere mgbidi
Osote: Odo jede mabul mmanụ aṅụ onyx slab na taịlị maka ime ime
Afghanistan nkume slab nwanyị pink onyx mabul fo ...
Mpekere onyx dragọn translucent azụ azụ maka...
Backlit mgbidi nkume taịlị-acha anụnụ anụnụ onyx marble maka l ...
Ọnụ ego kacha mma jed stone light green onyx maka ngosi...
Ezi price translucent nkume slab ọcha onyx wi...
Mayfair calacatta ọcha zebrino onyx marble maka...
Multicolor marble nkume uhie onyx mgbidi ogwe fo ...
Natural apple green jed onyx marble stone slab...
Natural Jade green onyx nkume slab maka ime ụlọ ịwụ ...
Gray Granite, Granite odo odo, Taịlị mgbidi Marble ọcha, Gray Gray dị ọkụ, Ihe mgbakwasị ụkwụ Blue Granite, Black Granite,